यि हुन् संसारकै लामा खुट्टा भएकी हट मोडल,जसको हुन्छ चौतर्फी चर्चा – Khabarbot
एजेन्सी । मोडलहरु विभिन्न कारण सदाबहार रुपमा नै चर्चामा आइरहन्छन् । यसैबिच यतिबेला विश्वकै लामा खुट्टा भएकी मोडल उनका खुट्टाका कारण चर्चामा छिन् ।
सकी सुपरमोडल अनासतासिया रेशेतोवा उमेरले जम्मा २५ वर्षकी भइन् । उनलाई स्कुलमा जिराफ नामले पनि बोलाइने गरेको संचारसंस्थाहरुमा उनले दिएको अन्तरवार्तामा खुलाएकी छिन् ।इन्स्टग्रामका उनका फलोअर सुन्दरता भन्दा खुट्टाको तारिफ भएपछि उनी सबैको रोजाईमा पर्ने गरेकी छिन् ।
किन गर्नु हुँदैन एउटै गोत्र भित्र बिहे? यस्तो छ कारण? एजेन्सी – धेरै मानिसहरु एउटै गोत्र विच विवाह गर्नु हुँदैन भन्छन् तर किन भन्ने कारण चाहिं कमैलाई मात्र थाहा छ । हिन्दुधर्मको सोह्र संस्कार मध्ये एक संस्कार विवाह पनि हो । विवाहले वरवधु मात्र नभई दुई परिवार बीचको सम्बन्ध पनि बलियो बनाउँछ । हिन्दुधर्ममा एकै गोत्रमा विवाह गर्न नहुने मान्यता छ । आजकल यो परम्पराको पालन गर्न मानिसहरुले अटेर गर्न थालेका छन् तर धर्मग्रन्थहरूमा भने सहगोत्री विवाहलाई निषेध गरिएको छ ।
अनेक अनुसन्धानहरूले व्यक्तिहरुलाई जेनेटिक रोग नलागोस् भनी सेपरेसन अफ जीन्स अर्थात नजिकैको नातेदारसँग विवाह गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । नातेदारहरूमा जीन सेपरेसन अर्थात विभाजन हुन पाउँदैन । एउटै गोत्रमा विवाह गर्ने जोडीको बच्चामा वंशाणुगत जेनेटिक रोग लाग्छ अनि उनीहरूमा कलर ब्लाइन्डनेस अर्थात रंग नचिन्ने रोग पनि लाग्छ ।
यस्तो जोडीको बच्चामा विचारधारा, रुचि र व्यवहारमा कुनै नयाँपन हुँदैन । बच्चामा रचनात्मकता हुँदैन । उनीहरूको मानसिक विकास पनि हुँदैन । त्यस्ता बच्चालाई मानसिक रोग, शारीरिक समस्या, अंगहरूको उचित विकास नहुने समस्या र अनेकथरी वंशाणुगत रोग लाग्छन् । त्यसैले एउटै गोत्रका मानिसहरु वीचको विवाहले बैवाहिक जीवन दुखद हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।